Vagadziri vezvigadzirwa uye fekitori - China Zvigadzirwa Vagadziri - Chikamu 4
Masiki ekurapwa ekumeso anogadzirwa nematanho maviri ejira risina kurukwa rine mweya unofema, wakakodzera kushandiswa mazuva ese.
Disposable yekurapa kumeso masiki maficha:
Yakadzika yekufema kuramba, inoshanda mhepo kusefa
Peta kuti ugadzire iyo mativi-matatu nzvimbo yekufema ye360 degree
Dhizaini yakakosha yeVakuru
Chiremba kumeso mask yekushandisa kamwechete (diki saizi)
Dhizaini yakakosha yeMwana
Chiremba chekuvhiya mask yekushandisa kamwe chete
Masiki ekuvhiya ekurapa anogona kuvharira zvidimbu zvakakura kupfuura mana ma microns muhupamhi. Mhedzisiro mhedzisiro muMask Kuvhara Laboratory munzvimbo yekuchipatara inoratidza kuti mwero wekutenderera kwemask yekuvhiya i18.3% yezvimedu zvidiki pane 0.3 microns zvinoenderana neyakajairika marapirwo.
Masiki ekuvhiya ekurapa maficha:
Microfiltration yakanyunguduka jira jira: ramba mabhakitiriya guruva mukume wemhepo makemikari anopinza hutsi uye mhute
Isina-yakarukwa ganda dura: hunyoro hwekumwa
Yakapfava isina-yakarukwa jira rukoko: yakasarudzika pamusoro pemvura kuramba
Doro padhi chigadzirwa chinoshanda, chimiro chayo chine 70% -75% isopropyl doro, ine simba rekudzivirira.
84 inouraya utachiona ine huwandu hwakawanda hwekuita mbichana, kumisikidza kwechikamu chehutachiona
Iyi mini mini imba atomizer ine compact size uye kurema uremu.
1. Kune vakweguru kana vana vane hutachiona husina kutsarukana uye vanotapukirwa nezvirwere zvekufema zvinokonzerwa nekusvibiswa kwemweya
2. Haufanire kuenda kuchipatara, ishandise yakananga kumba.
3.Convenient kuitisa kuenda, inogona kushandiswa chero nguva
<< <Yapfuura 12345 Inotevera> >> Peji 4/5